Madaxweynaha dalka oo ku baaqay in la iska kaashado la tacaalidda isbeddelka cimillada | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo ku baaqay in la iska kaashado la tacaalidda isbeddelka...
Madaxweynaha dalka oo ku baaqay in la iska kaashado la tacaalidda isbeddelka cimillada
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ka go’an tahay dhaqangelinta qorshayaasha iyo barnaamijyada ku aaddan wax ka qabashada saameynta la xiriirta isbeddellada cimillada.
Waxaa uu soo jeediyay in wadamada kala duwan ee dunida laga doonayo inay iska kaashadaan xal u helidda caqabaddan si la mid ah cudurka COVID-19.
Mr. Kenyatta ayaa xusay in Kenya ay muujinayso sida ay diyaar ugu tahay u istaagidda arrinkan balse aynan keligeed guulaysan karin.
Hadalkan ayuu jeediyay xilli uu galinkii dambe ee shalay ka qayb galay kulan muuqaal ah.
Waxaa sidoo kale shirkaas ka qayb galay mas’uuliyiin ay ka mid yihiin ra’iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson dhigiisa India Narendra Modi , xoghayaha guud ee qaramada midoobay António Guterres iyo Ban Ki-Moon oo xilkan kaga horreeyay.
Previous articleGolaha wakiillada Maraykanka oo xilka qaadistii Trump u gudbiyay aqalka sare
Next articleBooliska Netherlands oo xiray in ka badan 150 qof oo dibadbaxayaal ah